दिउँसोको १२ : २१
सरकारले भन्सार विभागका कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भत्ता दिनका लागि १० करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। चालु वर्षको बजेटबाट निजामति कर्मचारीहरुका लागि भत्ता कटौति गरेको सरकारले पछि आएर दिन...
abhiyan.com.np . ५ महीना अघि
सातओटै प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आइतवार बजेट प्रस्तुत भयो । कुल २ खर्ब ६० अर्बको बजेट प्रस्तुत भएकामा प्रदेश ३ ले सबैभन्दा बढी र सुदूरपश्चिमले सबैभन्दा कम बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रद...
सत्तारुढकै सांसद भन्छन्–‘परम्परागत ढंगबाट ल्याइएको बजेटले कर्णालीको मुहार फेर्न सकिँदैन’
मानबहादुर वली (इमेज) सुर्खेत, असार ३ । चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म करिब २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि पुँजीगत खर्चको दायरा घटाएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमार्फ...
साउनबाटै कार्यान्वयनमा जान्छौ : मन्त्री ढुङ्गेल
rajdhanidaily.com . ५ महीना अघि
चुरे मकवानपुर। प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले हिजो असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटको सन्दर्भमा आज हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गदै थप प्रष्ट्याएका छन् । म...
७ वटै प्रदेशको बजेट समीकरण, कुन प्रदेशले कसरी गर्दै छन् खर्चको जोहो ?
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सातवटै प्रदेशहरुले प्रादेशिक बजेट विनियोजन गरेका छन् । केन्द्रिय तथा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटको ठीक १५ दिनपछि असार १ गते सात वटै प्रदेश सरकारहरुले आ–आ...
प्रदेश २ को बजेटमा पञ्चायतकालको झल्को ! (भिडियो)
नवीन सिंह जनकपुर, असार ३ । प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले यथार्थ धरातल बिर्सेर महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको आरोप ...